चेपाङ समुदायको पीडा– यस वर्ष पनि दशैंले रुवाउने भयो ! - Dainik Online Dainik Online
चेपाङ समुदायको पीडा– यस वर्ष पनि दशैंले रुवाउने भयो !
प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०७७, मंगलबार ४ : ३६
लमजुङ । कोरोना भाइरसको महामारीका बीच पनि नेपालीहरु ‘धुमधाम’सँग दशैं मनाउने तयारीमा छन् । तर, चेपाङ्ग समुदाय भने दशैंमा भात खान पाइएला कि नपाइएला भन्ने पिरमा छ ।
लमजुङको बेँसीशहर नगरपालिका–११ चिती बरबोटको चेपाङ समुदायलाई दशैँ भित्रिसके पनि आम्दानीको कुनै स्रोत नभएकाले अर्थाभावमा दशैंका बेला खाने चामल समेत छैन ।
दश घर रहेको बरबोटका चेपाङलाई विगतमा वर्षेनी सहयोग आउने गरेको र त्यसकै भरमा दशैँ मनाउँदै आए पनि यस वर्ष दशैँको चौथो दिनसम्म पनि कहीँकतैबाट केही सहयोग नआउँदा चेपाङ समुदायलाई सताउन थालेको नेपाल चेपाङ सङ्घ लमजुङ शाखाका पूर्वअध्यक्ष अमृता चेपाङले बताइन् ।
उनी भन्छिन्, ‘विगतमा जस्तो दशैँ यस वर्ष कोभिड १९ का कारण नमनाए पनि खानाका लागि यहाँका अधिकांश चेपाङलाई दशैँमा चामलसमेत किन्ने पैसा छैन ।’
दशैंमा मीठोमसिनो खाएर हर्षउमङ्खका साथ मनाउनका लागि आर्थिक अभावका कारण अरुको भर पर्नुपर्दा र सहयोग अहिलेसम्म नआउँदा बालबच्चालाई नयाँ कपडा लाउन र एक छाक खानलाई समस्या भएको ५७ वर्षीय पूर्णबहादुर चेपाङले सुनाए ।
यहाँका चेपाङ समुदायसँग खुर्सानी लगाउनलाई समेत आफ्नो जमिन छैन । गाउँमा रहेका अन्य समुदायको जमीनमा अधियाँ गरेर खेती गर्नुपर्छ ।
वर्षभरि गरिएको खेतीबाट उब्जेको अन्नबाली आधीआधी गर्दा दुई महिनाबाहेक खान नपुग्ने ५७ वर्षीय पूर्णबहादुरको भनाइ छ ।
४७ वर्षीय तिलकबहादुर चेपाङ भन्छन्, ‘गरीबलाई के दशैँ के चाडपर्व, सधैं एकनाश भएको छ । जब/जब चाडपर्वको बेला आउँछ अरुले नयाँ नयाँ लगाएको देख्दा हाम्रा छोराछोरीले हामीलाई पनि त्यस्तै कपडा ल्याइदिनुस् न बुबा भन्ने गर्छन् । त्यति बेला मलाई निकै नरमाइलो लाग्छ, अनि मन साह्रै रुन्छ ।’
बेंशीशहर गरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालका अनुसार गत वर्ष दशैं मनाउन भनेर चेपाङ समुदायलाई सहयोग गरिएको थियो । तर, यस वर्ष केही जानकारी नगराइएकाले दिन नसकिने उनको भनाइ छ ।
बरबोटका चेपाङ समुदायका १० घर र दोर्दी गाउँपालिका ९ भीरकुनाका चार घर गरी जिल्लामा १४ घरधुरी चेपाङ छन् । चेपाङ समुदायका व्यक्तिले अन्य समुदायको खेतीपाती गर्दै जीविका चलाउँदै आएका छन् ।